Maxaa Laga Dhaxli Doonaa Khilaafka Siyaasadeed Ee U Dhexeeya Golayaasha DFS ?+(FAALLO) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxaa Laga Dhaxli Doonaa Khilaafka Siyaasadeed Ee U Dhexeeya Golayaasha DFS ?+(FAALLO)
Maxaa Laga Dhaxli Doonaa Khilaafka Siyaasadeed Ee U Dhexeeya Golayaasha DFS ?+(FAALLO)
Marxallad-siyaasadeed calawsan iyo Kala Aragti duwanaansho ayaa ka dhex muuqda Golayaasha Qaranka dhexdooda iyo DF S iyo Maamul-gobaleedyadda, wuxuuna muranku gaaray Figta ugu sarreysay marka loo eego Halbeegga Siyaasadda Maanta.
Khilaafka xubnaha sare ee Golaha Barlamaanka iyo Golaha Fulinta ayaana ah tusaalaha ugu mudan xaalladda kacsan ee Siyaasadda, iyadoo ay Madaxda Sare ee Labada Gole u muuqdaan kuwo uu ka dhexeeyo Hardan-siyasaadeed iyo Loolan hoose oo ay labada dhinac ku klaa disan yihiin.
Khilaafka muuqda waxa uu u dhexeeya sida la sheego Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiyaha BFS, Maxamed Mursal Sh. C/raxmaan iyo xubno kala taageersan Labada Hoggaamiye ee ugu sarreysa Hoggaaminta dalka.
Tan iyo isbuucii hore waxaa jirtay inay Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha BFS yeesheen dhowr Kulan oo uu RW Xasan Cali Kheyre ku wehliyey, waxaana ilo-wareedyo sheegeen in Kulamadaasi ahaayeen kuwo xasaasi ah oo ay Madaxda isku maan diidsanayeen qoddobo laga xusi karo:
1- Ciiddanka Boliska ee loo diray Baydhabo, si ay u sugaan Ammaanka xilliga laga dooranayo Madaxweynaha Cusub ee Maamulka K/Galbeed.
2- Faragelinta la sheego inay DFS ku hayso Nidaamka Doorashadda ee K/Galbeed.
3:-Warbixintii Guddiga Miisaaniyadda Golaha Shacabka ay ku eedeeyeen lunsasho Hantiyadeed ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Gobolka Banaadir.
4- Khilaafkii ka dhashay Guddigii Miisaaniyadda iyo Maaliyadda ee BFS ee la kala diray, balse uu Guddoomiye Mursal dib-u-hawl geliyey.
Qoddobadaasi iyo kuwo kale ayeyna u muuqataa inay soo dedejisay Mooshinkii ay xubno ka tirsan BFS, kuna feker ah Guddoomiye Mursal ay shalay ka keeneen in Madaxweyne Farmaajo xilka laga qaado.
92 Xildhibaan ayaa la sheegay inay saxiixeen, inkastoo qaar ka mid ah Xildhibaanadaasi gudbiyey Mooshinka ay markii dambe sheegeen in magacyadooda laga been abuurtay.
Xoghayaha Guud ee BFS, C/kariim Xaaji Cabdi Buux oo soo saaray Hdaal-qoraal ah ayaa sheegay inay buuxiyeen Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha DFS.
Warbaahinta Caalamka waxay Qoddob-wareedkooda ugu muhiimsan xalay ilaa maanta u ahaa Arrimta Mooshinkaasi, waxayna taxliil ku samaynayeen saamaynta Mooshinkaasi iyo Isbedelka Siyaasadda muuqata xilligan ee dalka Somalia.
Diplomaasiyiinta ayaa rumeysan in Khilaafka haatan laba kacleeyey uu salka ku hayo Khilaafkii DFS iyo Maamul-gobaleedyadda, kaasi oo Olol-siyaasadeed kale ku noqday Murankii ka dhex jiray Golayaasha Qaranka.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in loo baahan yahay in la qaado Tallaabo Miyir-qab Mas’uuliyadeed leh, Dulqaad iyo Isu-tanaasul, si aysan xaalladu u gaarin meel aan wax laga qaban karin.
Saddexda Mas’uul ee ugu sareeya ayaana laga filayaa inay xaalladda ay abuureen xal ka galaan, isla markaana laga hortago Khilaaf Baahsan oo sii kala fogeeya Madaxda Qaranka iyo Xildhibaanadda BFS oo iminka u muuqda inay labada dhinac u kala xagliyaan.
Madaxda Qaranka waxaa looga baahan yahay inay Dareen u yeeshaan caqabadda ka dhalan karta haddii Mas’uul xilka looga qaado Khilaaf Shaqsiyaasadeed, iyadoo markhaati laga ahaa dhacdooyin noocaasi oo Mas’uuliyiin hore xilalka looga xayuubiyey waxa loogu yeero Mooshino la soo abaabulay oo cadiifad shaqsiyadeed ama kooxeed ku salaysnayd.
Si kastaba ha ahaatee, Xaalladda haatan taagan ayaan la ogeyn waxa laga dhaxli karo iyo Madaxda uu daadku qaadi doono, illayn Fallaartii cirka loo ganay, cid kasta wey filan kartaa.